Faysal Cali-waraabe oo sheegay in la laalay heshiisyadii uu Jamaal la galay-Daawo | Berberanews.com
Home WARARKA Faysal Cali-waraabe oo sheegay in la laalay heshiisyadii uu Jamaal la galay-Daawo
Faysal Cali-waraabe oo sheegay in la laalay heshiisyadii uu Jamaal la galay-Daawo
Hargeysa(Berberanews):- Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa Khudbad ka jeediyey Shirweyne aan caadi ahayn oo ay Xukuumaddu taageeraysay oo Garabka uu Hoggaamiyo ee Xisbigaasi ku qabsaday Huteelka Adam’s in ee magaalada Hargeysa, halka Garabkii kale ee uu hoggaamiyo Musharraxa Xisbigaas Jamaal Cali Xuseen ay Xukuumaddu ka joojisay Shir kan la mid ah oo uu isla maanta ku qabsan lahaa Huteelka Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxaanu Faysal shirkaas ka sheegay in la laalay heshiisyadii uu Jamaal la galay.
Faysal Cali Waraabe Shirka Garabkiisu ku qabsaday Hargeysa Maanta ee ay Xukuumaddu taageeraysay sida ay Aftahannews u xaqiijiyeen ila-wareedyo dawladda ka tirsan, isla markaana Garabka Jamaal ku eedeeyey Garabka Faysal, waxaa ka qaybgalay Guddoomiye Ku-xigeenka Xisbiga Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, Xubno ka socday Guddiga diiwaangelinta Ururrada Siyaasadda iyo Ansixinta Xisbiyada Qaranka iyo Marti-sharaf kale iyo weliba Ergooyin ka mid ah Garabka Faysal Taageersan ee UCID.
Waxa uu Faysal Shirkaas ka jeediyey Khudbad uu kaga hadlay ujeeddadii UCID loo aasaasay, heshiisyadii Jamaal dhex-maray wakhtigii ay isku biireen, ujeeddada shirkan loo qabtay iyo qodobbo kale. Waxaanannu Khudbadda uu Shirkan ka jeediyey Faysal idiinku soo gudbinaynaa Muuqaalkan Hoose ee Daawasho wacan oo wanaagsan:-
Previous articleMaayarka Berbera oo Deeq Lacageed ugu yaboobahay Guddiga Abaaraha
Next articleGuddiga Abaaraha Gobolka Saaxil oo Raashin mucaawimo ah u kala diray Deegaannada Abaaruhu ka jiraan